Dad-qalatada Sacuudiga oo aan Cambaaraynayo(Soomaaliyeey ka dhiidhi Dulmigaas)
Acraabtii dadka iyaga oo nool aasi jiray (Markay gabari dhalato) ,intaan nabigeenii suubanaa aanu koonka imaan,ayaan waligeed iska dayn caadadii xumayd ee ahayd dad qalatinimda iyo naxariis-darada ay caanka ku tahay qowlaysatada aan rabi iyo rag aqoon ee maalin walba qoorta ka goynaysa dhalinta aan waxba galabsan ee maciinka soo baday .
Soomaalida waxay noqotay looma-ooyaan lagu tijaabiyo ciqaabaha ay samaystaan badawda ka talisa khaliijul carab. Waxaan marna quluubtayada ka go,ayn sida waxashnimada leh ay qolyahaas ula dhaqmaan soomaalidaan masiibadu ku habsatay oo daafaha aduunka u kala carartay. Wadamada Carabta waxay noqdeen meelaha uga xun ee Soomaalidu intay maciinka badeen lagu bahdilay oo wax la kufasado kuwa la masaafuriyo iyo wax la xasuuqo sida ku dhacday Wiilashaan masaakiinta ahaa ee lagu qashay wadanka sacuudiga ayagoo waxa lagu eedeeyay wadamada sharcigu ka jiro ay ciqaabteedu tahay lix(6)_bilood oo qura:waayo wax ma ay dilin burcadnimana ma ay sameeyan ee waxaa lagu eedeeyey inay nin taksiilaa la murmeen deedna gacan ka hadal aan waynayn u gaysteen.
Muddooyin badan ayaan waxaa soo qorayay inaan meelna Carab ka ahayn oo nimankaas aan isku dhajinayno la iska daayo sheegadkooda, waxaase iiga yimmid falcelisyo badan oo la leeyahay warkaaga naga jooji Carabta waaa ehelkeenne. Waxaan u malaynayaa in inta caqliga lihi ay garanayaan maalintaad liidatid kii ku gargaara ayaa walaalkaa, laakiin kii maalinta aad jabto kugu sii wirirsadaoo maatadaad iyo shabaabka silicdilyeeya kaas(sida Carabta badda cas naga xigta) ehelnimo kala dheeridin.
Waxaan aad uga xumahay inaan arag rag aan islahaa oo sheegta masuuliyad ayaa cambaaraynayaa falkaas waxashnidamda leh ee nimanka horbooda sacuudiga ay ku sameeyeen wiilasha inta xabsi lagu haysatay lix sano hadda tusalee looga jeedo baqdin gelin kuwa ku kacsan xukunkooda la laayay. waxaase aan marna soomaalidu iloobayn ragga sida geesinamada leh u Cambaareeyay qowlaysatada Sacuudiga kuwaasoo kala ah Gudoomiyaha gobalka Banaadir Cabdullaahi Firimbi iyo wasiirka warfaafinta Maxamuud jaamca sifir oo iyagoo ku hadlaya magacyadooda si gaar u cambaareeya falkaas aan inaba laga cafiyeeyan dhagaraqabyaasha xasuuqay wiilashaas hiilka waayay. Waxaa nasiib daroo ah in intii badnayd ee la filayay inay ka hadlaan arrintaan ay noqdeen kuwa fiirsada oo iyaga isku jeeda.
Waar geesinimada aad idinku isku leedihiin u yeesha cadowga shabaabtiina qalanaya.Oo maanta waxay arini taagan tahay yaa maali jiray oo soomaali ka naxaya.
Noloshayda ka go'imayso caloolxumada aan ka qaaday sida baniidanimada ka baxsan ee loola dhaqmay dhalintaas soomaaliyeed ee wadankoodii uga soo cararay abrisyada ku shiraya Nayroobi maciina mowday Dad-qalatada dhinaca badda cas inaga xigta.
Anigoo ku hadlaya magacayga una dhashay qoomiyada soomaaliyeed ee Cawsla fil waxaan cambarayn usoo jeedinayaa kuwa dubtay wiilashadayada aan hiilka helin gooray noqotaba waa godob u taal dadkaas oo jiilka bahda soomaaliyeed gooray noqotaba waanu la xisaabtamin.
Waxaan soomali meelay joogtaba kula dardaarmayaa inay ka dhiidhiyaan falkaas waxashnomo oo ay ku dhaqantay Acraabta sacuudga oo meelaha baniiadamka laga tixgeliyo noloshiisa laga dhigo mudahaaraad siiba safaaradahooda hortooda.Qof walina uu diiwaankiisa geliyo godobtaas aan marna aan ka tirmayn qulubbta inta soomaalida dhaladka ah.laakiin kuwa qalfoofkoodu soomaalida u egyahay aanse aan shaqada nagu lahayn sheegtana ummad ayna muuq iyo dhaqan wadaagin warkaygu uma socdo waayo iyagaaba iiga daran nacabka i qalanaya.
Abwaan soomaliiyeed ayaa yiri:
waxaa jira Ma-daalow
dir qof aad wadaagtaan
oo diir wadaagtaan
oo degel wadaagtaan
oo diin wadaagtaan
misna dunida kuu neceb
dumintaada loo diray
Ilaahw Soomaali u maciin oo ka abaal mari kuwii ka haray warasadii duugi jiray gabdhaha iyagoo nool kwaqtigaasoo aad ugu maciintay noorkii rasuulka ee aad usoo dirtay.
Saciid Xasan Dhegacade